Daawo hawayney garaacday canug umul lagula jiro oo maxkamad lasoo taagay - iftineducation.com
Daawo hawayney garaacday canug umul lagula jiro oo maxkamad lasoo taagay
aadan21 / November 28, 2014
iftineducation.com – Haweeney Shaqaale Guri ah oo lagu magacaaba Tumuhiirwe ayaa si xun oo naxariista ka baxsan waxa ay u jirdishay Gabar yar oo da’deeda lagu sheegay 2-sano jir, waxaana falka foosha xun ee ku kacday Haweeneydan duubtay Kaamirad qarsoon oo guriga ku xirneed.
Tumuhiirwe oo 22-sano jir ah ayaa shaqadeeda waxa aheyd in ay xanaanayso gabar yar oo labo sano jir ah oo uu dhalay nin lagu magacaabo Erick Kamanzi, Laakin haweeneedan ayaa ku kacday fal ka baxsan shaqadeeda kadib markii ay Gabadha yar si xun u jir dishay iyadoona inta dhulka dhigtay caloosha uga istgaatay kadibna haraanti la dhacday.
Aabaha dhalay Gabadha yar ayaa caro xoogan uu ka qaaday dhaawaca gabadhiisa soo gaaray waxa uu isna garaacay haweeneedii gabadhiisa jirdishay, haweeneeda shaqaalaha aheed ayaa durba wacday Booliiska kuna wargalisay in la garaacay.
Ciidamada Booliiska ayaa xiray ninka dhalay gabadha yar garaacana u geestay Haweemeeda shaqaalaha aheed balse markii dambe laga sii daayay xabsiga kadib markii ay arkeen Muuqaalka ay duubtay Kaamirada Qarsoon ee muunjinayay Tacadiga ay haweeneedan kula kacday gabadha yar.
Tumuhiirwe, ayaa qoyskani u shaqaynaysay muddo seddax bilood ah iyada hada kasoo muuqatay maxkamad kutaala Nakawa Dalka Uganda, waxa ayna wajaheysa dacwado la xariira tacadiga ay u geesatay gabadha yar.
Gabadhan yare e sida xun loo jirdilay ayaa la sheegay markii hore inay u dhimatay dhaawcayadii kasoo gaaray jirdilka loo geystay ayaa hanada war danbo oo ay soo saareen kooxdii baaritaanka ku heysay kiiskani ayaa sheegay inay wali nooshahay gabadha, daaweyn ay ku socoto wali.
HALKAAN KADAAWO RIIX
Daawo Royal tv oo lawareegtay barnaamijkii cabdigood keensatayna abwaan good cusub
Loolan cusub Oo ka dhexeeya Laba fanaan Oo saaxiiba ah-Daawo